I-PepsiCo izokwethula cishe amahektha ayizigidi ezi-2030 zezindlela zokulima eziqhubekayo ngo-3 - Potato System Magazine
I-PepsiCo isebenzise cishe amahektha ayizigidi ezi-2030 zezindlela zokulima eziqhubekayo ngo-3
в izindaba, Ukuphinda usebenzise kabusha, Ecology
UPepsiCo umemezele ukuthi ngo-2030, uPepsiCo + uhlela ukusebenzisa izindlela zokulima ezizinzile kumahektha acishe abe yizigidi ezintathu asetshenziswa abahlinzeki bawo njengengxenye yephrojekthi yePepsiCo +. Ngenxa yalezi zinyathelo, inkampani ihlela ukunciphisa ukukhishwa kwe-carbon dioxide okungenani ngamathani ayizigidi ezi-3 eminyakeni eyishumi. I-PepsiCo izophinda futhi ithole i-10% yezinto zayo zokusetshenziswa kwezolimo emithonjeni efanele futhi izibophezele ekusekeleni abantu abangaphezu kuka-3 kwezolimo emhlabeni jikelele.
Uhlelo lwePepsiCo lwePositive Agriculture lumayelana nokukhulisa izithako inkampani ezidingayo ngendlela esheshisa ukwamukelwa kwemikhuba ebizwa nge- “pepsiCo”. "Ukulima okuzivuselelayo" - okusho ukuthi, akulimazi imvelo futhi ngasikhathi sinye okunikela ekuthuthukiseni impilo yamapulazi. Izindawo eziyinhloko zohlelo zifaka:
Ukuqaliswa kwemikhuba “yokulima esimeme” yamahektha ayizigidi ezintathu - okungukuthi, cishe i-3% yomhlaba osetshenziswa abahlinzeki benkampani ukulima izinto zokusetshenziswa. Lesi sinyathelo sizonciphisa ukukhishwa kwesikhutha ngamathani ayizigidi ezi-100 ngonyaka ka-3. Ngemuva kweminyaka eyishumi yokwamukela ngempumelelo imikhuba yokulima esimeme nabalingani bayo, i-PepsiCo izoqhubeka nokusebenza nabalimi emazweni angama-2030 ukuqinisekisa ukongiwa kwemvelo.
I-PepsiCo yinkqubo enkulu kakhulu yezimboni yamazambane nobisi oluhlaza eRussia. Phakathi kwabaphakeli baseRussia bezinto zokusetshenziswa, inkampani ikhuthaza umkhuba wokulima kabusha, okuhlose ukuhlonipha inhlabathi (ngokwesibonelo, ngokushintsha ukujikeleza kwezitshalo), ukusetshenziswa komanyolo "oluhlaza". Le nkampani icwaninga futhi isebenzisa isisombululo se-smart CropTrack sokunisela ngenkasa emapulazini amazambane ukonga imithombo yamanzi. Le nkampani ithuthukisa imikhuba efanayo e-Ukraine, lapho ngo-2019 kwethulwa khona uhlelo oluzosebenza nabaphakeli bamazambane ukuze kutholakale isisekelo sezinto ezingavuthiwe zokukhiqiza ukudla okulula ezweni.
Ukutshalwa kwezimali ezikhungweni zokugcina izitshalo zemifino eRussia nase-Ukraine kuvumela ukuqaliswa kwezixazululo zobuchwepheshe ezinciphisa ukugcotshwa kwekhabhoni emisebenzini yokugcina kanye nokunciphisa izindleko zemithombo yemvelo. Indawo yokugcina impahla yokugcina izinto zokusetshenziswa, ezovulwa ngo-2021 eNovosibirsk, izokwakhiwa ngokuhambisana nalesi simiso.
Le nkampani isebenza nabaphakeli ukwenza ngcono ikhwalithi nokusebenza kahle kokukhiqizwa kobisi oluhlaza, okusiza ukunciphisa ukukhishwa kwegesi engcolisa ukushisa okuhambisana nokulima ubisi. Ngo-2030, iPepsiCo eRussia ihlela ukunciphisa ukukhishwa kwegesi engcolisa izinga lokushisa ngamaphesenti angama-40 uma kuqhathaniswa namazinga ka-2015.
Ukwesekwa kwabantu abangaphezu kwama-250 emkhakheni wezolimo, kubandakanya nezinhlelo zokuqashwa nezokuqashwa kwabesifazane. IPepsiCo ihlela ukusiza imikhakha esengozini kakhulu.
ERussia, le nkampani iphinde iqhubeke nohlelo lokuqeqesha kanye nezingqungquthela zabathengisi bobisi abaluhlaza, olwethulwe ngo-2012 ukweseka abakhiqizi bezolimo baseRussia. Ngo-2020, inkampani yaqhuba ukuqeqeshwa okungama-20, lapho abantu abangaphezu kuka-600 babamba khona iqhaza, futhi phakathi nalo lonke lolu hlelo, cishe ongoti abayizinkulungwane ezinhlanu baba yingxenye.
I-PepsiCo iyaqhubeka nokutshala imali kubaphakeli baseRussia bamazambane amazambane futhi ithuthukise isisekelo sayo sezinto eziluhlaza ezweni lonke. Ngo-2020, inkampani yethula uhlelo lwezolimo eSiberia. Ukuthuthukiswa kwabahlinzeki bamazambane baseRussia umnikelo wenkampani ekusekeleni umkhakha wezolimo waseRussia. Amapulazi angabalingani amazambane enkampani awagcini ngokwandisa ngempumelelo ibhizinisi lawo, kepha futhi athuthukisa izifunda zobukhona bawo ngokuqaliswa kwamaphrojekthi abalulekile ezenhlalo. Eminyakeni eyi-15 nje kuphela, inkampani itshale imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 50 kuhlelo lwe-Agroindustry Leaders Supplier Development Programme.
E-Ukraine, njengengxenye yohlelo lokuxhasa abaphakeli olwethulwe ngo-2019, uPepsiCo wenze uqeqesho oluyishumi lwabachwepheshe bamapulazi ngokukhula, ukunakekelwa nokugcinwa kwezitshalo.
Ukuhlwaya okungu-100% kwezinto zokusetshenziswa eziluhlaza kuphela emithonjeni efanele - lokhu kuzobandakanya hhayi kuphela ukuthengwa okuqondile kwezithako ezisemqoka njengamazambane, ummbila, okusanhlamvu namawolintshi, kodwa futhi nezithako ezibalulekile ezitholwe emakethe njengamafutha emifino. Lokhu sekuvele kukhishwa eYurophu, kufaka phakathi iRussia, iUkraine kanye neHungary, lapho iPepsiCo isiza khona ukwenza izindlela zokusimama nabaphakeli bakawoyela be-sunflower. Lokhu kulindeleke ukuthi kusize ukukhuphula isivuno sezitshalo, kunciphise izindleko zemithombo, kuthuthukise impilo yomhlabathi futhi ngaleyo ndlela kunciphise umthelela kwezemvelo.
UPepsiCo uthenga imikhiqizo yezolimo emazweni angama-60, futhi ngenxa yemisebenzi yenkampani kwezolimo emhlabeni jikelele, kunemisebenzi ecishe ibe ngu-100 000. Ukuphela kuka-2020, inkampani ithole ukuthengwa ngqo kwemikhiqizo yezolimo eyi-100% emithonjeni efanele emazweni angama-28. Emhlabeni jikelele, lesi sibalo sesifinyelele kuma-87%.
ERussia, i-100% yezinto zokusetshenziswa zokukhiqizwa kwamazambane amazambane aqinisekisiwe ngaphansi kohlelo lokulima oluzinzile. Bonke abahlinzeki bahambisana ngokugcwele nezidingo zenkampani zezenhlalo, ezemvelo nezomnotho. Izindinganiso zenhlalo zisho ukwenziwa kwezimo zokusebenza eziphephile, ukugcina impilo yabasebenzi bamabhizinisi ezolimo, ukuvikela amalungelo abasebenzi kanye nokwenza ngcono izinga lempilo yemiphakathi yasendaweni. Izindlela zokubeka imvelo zifaka phakathi izindlela zokonga imithombo yemvelo nokunciphisa udoti ovela emisebenzini yezomnotho. Izindlela zokunquma zomnotho zisho ukuhlelwa okusebenzayo kwemisebenzi yamabhizinisi ezolimo, kukhuphule umkhiqizo wabo, kunciphise ukulahleka futhi kusungulwe ubudlelwano obuzinzile nobusizakala nabo bonke ababambiqhaza kule nqubo.
“Kubalulekile kithina ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kungakubeki engcupheni ukulethwa kwezinto ezingavuthiwe ezikhungweni zethu zokukhiqiza, futhi ukutshalwa kwezitshalo zezolimo akulimazi imvelo. Lokhu singakuthola uma sihlanganyela futhi sigxile ekuguqulweni kwekhwalithi yezolimo, ”kusho uSilviu Popovic, oyiChief Executive Officer yePepsiCo Europe. “Sizoqhubeka nokusebenza ngokubambisana nabalimi, abahlinzeki bethu, futhi sisheshise ukuqaliswa kwemikhuba yokuvuselela ukuze ibe yizinga labalimi. Ekugcineni, sesifikile isikhathi soguquko lwedijithali emapulazini, lapho idatha enkulu izodlala indima ebaluleke njengemishini yezolimo, nobuchwepheshe buzoqinisekisa ukukhula okusimeme. ”
UPepsiCo uzibophezele ekusebenziseni izindinganiso zokulima kabusha. Uma bengekho, inkampani izolandelela ukuqaliswa kokuzibophezela kokulima okusimeme kuzo zonke izinhlaka, ezifana nenani lamahektha alinywe ngokuzibophezela kanye nenani labalimi ababambe iqhaza kulolu hlelo. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kuzokwengezwa ngezinkomba ezifana nokwenza ngcono isimo nokuzala kwenhlabathi, ukunciphisa ukukhishwa kwekhabhoni dioksayidi, ukwenza ngcono isimo semizimba yamanzi esetshenziselwa ukunisela, ukukhulisa ukuhlukahluka kwemvelo, nokwenza ngcono izimpilo zabalimi. I-PepsiCo isebenza nezinhlangano zamazwe omhlaba ezifana ne-WWF ukwenza izindlela zamanzi namamethrikhi abhekelela ezolimo ezivuselelayo kanye nemikhuba yokulima esimeme kanye nemikhuba emihle yokongiwa kwamanzi.
Ukuzibophezela kwezolimo okusimeme kuyisinyathelo esilandelayo ohlelweni lwePepsiCo +, kulandela isimemezelo sakamuva sezinhlelo zokunciphisa ukukhishwa kwekhabhoni kuyo yonke indawo yokuhlinzekwa ngamaphesenti angama-40% ngonyaka ka-2030 nokuthola ukungathathi hlangothi ngokuphelele kwekhabhoni ngo-2040.
Tags: I-PepsiCoama-potato chips
Esifundeni saseBryansk, kwahlolwa amathani ayizinkulungwane ezingama-57,4 wamazambane embewu
I-Azerbaijan iphinda kabili ukungena kwamazambane kusuka e-Iran